Anigu waxaan ahay gabar 13 sanno jir ah waxaana jeclahay in aan u diro saaxiibkayga dhabta ah sawirkayga oo qaawan. Anigu gebi ahaanba waan qaawanahay. Laakiin qof iskuulka jooga ayaa igu yiri midaasi in ay tahay “filimada xun ama galmada ah ee ilmaha”. Miyaa la igu ciqaabayaa arintaasi? – Tips for refugees
Previous Previous post: Halkan dadku waxay inbaddan ka hadlaan galmada. Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah waxaana u malaynayaa in aysan qofna waxba ka galin. Maxay dadka oo dhan uga hadlaan waxyaabaha ku saabsan galmada?
Next Next post: Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno jir waxaana saaxiibo la ahay daryeelahayga. Mararka qaar waxaan la aadaa keligeena dabaal. Daryeelayaasha kale waxay u maleeyaan in ay midaani tahay arin aan wanaagsanayn waxayna doonayaan in ay iga celiyaan. Maxay sidaasi u samaynayaan?